AMALUNGA Ayaqalisa - Sikunye
AMALUNGA AyaqalisaIvo Kittel2021-03-09T00:19:49+02:00
Wena, ubambisene nebandla lakho, ungasebenzela ukwakha umphakathi lapho zonke izingane zinethuba lokuchuma nokufinyelela amandla azo ezinikezwe nguNkulunkulu.
Dlala Ingxenye Yakho Ngaphakathi Kwebandla Lakho
Ungahle ulazi kahle ithuba lezinsuku zokuqala eziyizinkulungwane zokuphila, noma uqala nje. Sikholwa ukuthi ubekeke ukuxhasa nokuqinisa imindeni. Hlola lezi zinyathelo ezingezansi ukuze uqalise:
Thola ugqozi ngokuthi ibandla lakho lingabamba iqhaza kanjani ekunikezeni zonke izingane isiqalo esiqinile sempilo. Uma ungakakwenzi, siphakamisa ukuthi uqale ngokuhambela ama-webinar eBandla lethu nasekuqaleni kwempilo nokuhlola okwengeziwe ngombono omkhulu nokuthi kusho ukuthini ‘FTD friendly’.
Khuluma nompetha wakho. Uma ibandla lakho libhalisile futhi lizibophezele ekubeni yi-FTD-friendly, kungenzeka kube khona umuntu oqavile ohola iqembu labantu eligxile emindenini.
Khuluma nomholi webandla lakho. Uma ibandla lakho lingakayisebenzeli imindeni ngenkuthalo ezinsukwini eziyizinkulungwane zokuqala, khuthaza umholi webandla lakho ukuba eze emcimbini weBandla nowasekuqaleni kwempilo.
Qala ukondla imindeni. Kunezinto eziningi ongazenza ezikhuthaza futhi ziqinise imindeni. Funda izinsiza zethu ekunakekeleni imindeni nokuthi ungadlala kanjani indima emphakathini.
Zihlomise. USikunye unikeza ukuqeqeshwa ukukuhlomisa ukuthi unikeze ukusekelwa okuthile emndenini. Hlola ukuthi uyafuna yini ukuvakashela ikhaya noma ‘isixhumi sothando‘ noma i-Flourish Ante- nangemuva kokubeletha.
Zigcine uxhumekile futhi usekelwa ngokuya kuma-Webinars wethu Wokusekela kanye nemibuthano yethu yeSikunye . Gcina usesikhathini ngokubhalisela incwadi yethu yezindaba, silandela izinkundla zethu zokuxhumana futhi ngifunda izindaba zoshintsho ezenzeka emasontweni kulo lonke elaseNingizimu Afrika.